Google AMP Cache URL jenareta - SN
flash_auto Gadzira AMP mapeji
code AMPHTML Tag jenareta
assignment_turned_in AMP cache yekutarisa
dns Google AMP Cache URL jenareta
warning AMP plugin haishande?
extension AMP Google Analytics Kodhi
extension AMP IVW kuverenga pamhepo
extension Simbisa AMP YouTube Tag
extension Simbisa AMP Brightcove Tag
extension Gadzira AMP Carousel Slider
extension Isa AMP iframe tag
extension AMP inorarama runyorwa basa
edit_attributes Dziviriro yedata
Google AMP cache url jenareta
Iyo Google-AMP-Cache-URL-jenareta inogadzira yakakodzera URL mu AMP-Cache-Fomati kubva kune yakajairwa URL yechero subpage, yechero webhusaiti.
Gadzira Google AMP Cache URL
- Ndokumbira umirire -
- webhusaiti inoongororwa -
Yakagadzirwa Google AMP cache URL
Gadzira AMP cache url
Iine yakachengetwa cache URL, iyo AMP vhezheni yewebhusaiti yakachengetwa muGoogle AMP cache inogona kunzi KANA iyo inoenderana peji yakatove yakanyorwa neGoogle uye yakachengetwa muGoogle cache.
Iyo AMP cache URL fomati
Kana zvichibvira, iyo Google AMP Cache inogadzira subdomain kune ese AMP mapeji ari pane imwechete dome.
Kutanga, iyo domain yewebhusaiti inoshandurwa kubva kuIDN (pony kodhi) kuenda kuTF-8 . Iyo cache server inotsiva:
yega yega - (1 hyphen) kuburikidza - (2 hyphens)
munhu wese . (1 poindi) kuburikidza - (1 hyphen)
Semuenzaniso : amp-cloud.de yaizove
Iyo dura rakashandurwa kero yekutambira yeGoogle AMP cache URL. Padanho rinotevera, yakazara cache URL inoiswa pamwe chete, pamwe nezvikamu zvinotevera zvakawedzerwa kukero yevaiti:
chiratidzo chinoratidzira mhando yefaira
a / c / yeAMPHTML mafaira
a / i / yemifananidzo
a / r / yemafonti
chiratidzo chinogonesa kurodha kuburikidza neTSL (https)
a / s / kuita
iyo yekutanga URL yewebhusaiti isina chirongwa cheHTTP
Semuenzaniso we URL muGoogle AMP Cache URL fomati:
Muenzaniso wepakutanga URL:
Dzidziso AMP cache url:
Chii chinonzi Google AMP cache?
Chikamu chekumhanyisa kwemawebhusaiti muiyo fomati yeGoogle AMP inokonzerwa ne otomatiki chengetedzo mune server cache yekutsvaga kweGoogle . Izvi zvinoreva kuti shanduro dze AMP dzewebhu hadzina kutakurwa kubva pawebhusaiti yewebhu, sezvazvinowanzoitika, asi zvakanangana nemhedzisiro yekutsvaga kweGoogle, kubva kune rimwe remaseva eGoogle (iyo Google AMP cache server) , iyo anowanzo gonesa zvakanyanya kukurumidza kurodha nguva.
Izvi zvinoreva kuti Google inoratidzira uye inochengetedza vhezheni ye AMP peji pane yayo sevha, pasi peyakazvimirira AMP cache server URL iyo inogadzirwa zvinoenderana neimwe pateni. Neiyo URL, mune iyo AMP cache URL fomati , unogona kufona kumusoro uye wotarisa yazvino AMPHTML vhezheni iyo parizvino yakachengetwa mu AMP cache yeGoogle yekutsvaga injini. - Rumwe ruzivo nezve Google AMP cache .
Gadzira AMP peji Dziviriro yedata & mashandisiro ekuki imprint
Mhoro uye ndinokutendai nekushanya kwako! - Makuki anoshandiswa kuronga mashandiro e "www.amp-cloud.de". Izvi zvinogona zvakare kusanganisira masevhisi uye zvemukati kubva kune vechitatu-bato vanopa, i.e. kupa masocial media mashandiro kana vhidhiyo yezvinyorwa, asi zvakare kugonesa isingazivikanwe, kuongororwa kwehuwandu hwekuita kwewebhusaiti kuvandudzwa uye kupa mari webhusaiti kuti kuenderere mberi kuvepo peji ino Side tsigiro. Zvichienderana nebasa, dhata inogona kupihwa kwauri inogona kupfuudzwa kune vechitatu mapato uye kugadzirisa navo Unogona kuwana zvimwe pamusoro pekushandisa uye nesarudzo dzekuchinja macookie macustomer pano: Ruzivo rwekuchengetedza dhata
Rega makuki ese
Ramba makuki ese